ọnwa: November 2019
site Liam Cartwright
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Ejegharị ejegharị na-dị iche iche nke ụwa naanị nwere ike ịbụ onye na-enye ihe ọmụma na-akpali akpali ahụmahụ. Ma ọ bụ ihe ị na-eme oge nile, ma ọ bụ a otu ugboro na a ndụ njem mụbaa gị horizons, njem nwere ike ịgbanwe ndụ gị. Ọtụtụ ndị mmadụ taa na-ahọrọ…
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji osimiri, osimiri, na ọdọ mmiri na-abụghị nanị mara mma eke ebube na-dị oké ọnụ ahịa atụmatụ a ezumike gburugburu. Anyị na-akpọ anyị 5 Best Natural Hot Springs Na Europe na ihe karịrị uru a nleta na-enyemaka nke Save A Train ụgbọ okporo ígwè tiketi….
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji Ọ bụrụ na ị dị nnọọ kwagara Netherlands ma ọ bụ na-eche echiche nke jumping na a ụgbọ okporo ígwè na nleta maka ụbọchị ole na ole, eleghị anya ị na-eche ihe na- 10 Ọtụtụ ihe omume pụrụ iche na Netherlands bụ. Obi ga-adị gị ụtọ ịmata na enwere ọtụtụ…